Nagu saabsan - Xuzhou Tianqi Mining Technology Co., Ltd.
Ku soo dhowow Macdanta
Waa maxay sanduuqa macdanta?
Laga soo bilaabo Oktoobar 31, 2008, ID Satoshi Nakamoto wuxuu isticmaalay warqad ka kooban sagaal bog si loo abuuro wax u dhigma hal triliyan yuan oo Bitcoin ka baxsan hawada khafiifka ah. Tan iyo markaas, shabakadan gebi ahaanba baahinteeda qarsoon, waxaa jiray abaalmarin nidaamsan oo loogu talagalay qof kasta oo ka shaqeeya jawaabta iyada oo la raacayo habka isku raacsan ee PoW: Caddaynta-shaqada waana kan ugu horreeya ee dhammaystira noodhka xirmooyinka. Abaal marintu waa 12.5 bitcoins hadda, ama qiyaastii $ 85,000. Nidaamkan loo yaqaan "macdanta".
Nooca cadeynta shaqada waa mid dhameystiran. Awoodda xoogan ee xisaabinta qalabkaaga ayaa ah, suurtagalnimada sare ee xisaabinta jawaabta. Maalmihii hore, macdan qodayaashu waxay isticmaaleen CPU-yada iyo GPU-yada si gooni gooni ah ay wax u qotaan. Kordhinta awoodda xisaabinta, barkadaha macdanta ee ururiya dad badan oo awood u leh xisaabinta ayaa soo ifbaxay. Barkadda macdanta ayaa fursad weyn u leh xisaabinta jawaabta iyo abaalmarinno, si qof walba u helo abaalmarinta qaybtuna sidoo kale u kordhiso. Isla mar ahaantaana, dhibaatadu sidoo kale waxay u muuqatay, ： macdan qodayaal aad u tiro badan oo iswada raacay, kuwaas oo dhaliya soona saara buuq iyo kuleyl badan, adeegsi awood badan. Waxaa jira dhibaato muhiim ah oo aad u adag in la raro, maxaa yeelay waxaa jira macdan qodayaal badan iyo layn qalab. Marka sanduuqa miinadu wuu dhashay.
Hadafkeenu waa inaan dunida u abuurno nidaam maaliyadeed oo furan.
Weelkan macdanta ah ee weelku ku jiro wuxuu siiyaa macdan qodayaasha xal ka waxtar badan kan macdanta qodista. Qeyb weyn oo ka mid ah qiimaha macdanta 'cryptocurrency' waxay ka timaadaa isticmaalka korantada iyo kharashka bakhaarka. Weelasha konteenarrada ee konteenarrada ku jira ayaa si fudud loogu qaadi karaa gawaarida xamuulka ah waxaana loo qaadi karaa meel kasta oo aad rabto inaad ku tagto adigoo leh awood hoose. Maaha mid xaddidan goobta, oo waxay leedahay dhaqdhaqaaq xoog leh, waana mid kharash-ku-ool ah iyo sidoo kale dib-loo-cusboonaysiin karo.
Macdanta Tianqi waxay soo afjartay taariikhdii hore ee samaynta sanaadiiqda macdanta oo ay ku jiraan wax lagu beddelo konteenarrada. Waxay isticmaashaa bir cusub oo khafiifa si ay u soo saarto sanduuqyada macdanta, taas oo ka dhigaysa kuwo waara oo qafiifa. Intaa waxaa dheer, waxaan dhisnay konteynarro qashin-qub ah oo loo yaqaan 'Cryptocurrency container' oo martigelin kara labada macdan ee ASIC iyo GPU si loo daboolo baahida macaamiil kasta. Haddii aad u baahan tahay weel 40 fuudh ah, sanduuq macdan gaar ah oo gaar loo leeyahay, ama shuruudo kala duwan oo gaar ah, gudaha Tianqi, wixii dalab ah waa la fulin doonaa. Sannadka 2020, sanduuqayaga macdanta laga faaruqi karo ee cusub iyo sanduuqa macdanta ee saliidda la qaboojiyey ayaa la raray oo loo adeegsaday cusbitaalkaiskudhaf
"Waxaan nahay shirkad ku takhasustay adeegyada aasaasiga ah ee Bit-coin. Ganacsigeedu wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood: Soo saarista qeexitaanno kala duwan oo ku saabsan sanduuqyada moobiilka guurguura, keenaya mashiinnada gacanta labaad ee macdanta ka hooseeya qiimaha suuqa"
Haye! tani waa Tianqi Mining. Waxaan nahay shirkad ku takhasustay soo-saarka iyo iibinta sanduuqa macdanta ee mobilada loo yaqaan 'cryptocurrency' iyo mashiinka macdanta loo isticmaalo. Waxaan leenahay warshad wax soo saar oo qiyaastii ah 3,000 oo mitir murabac ah, soo saarista iyo dhoofinta tilmaamaha kala duwan ee sanduuqyada macdanta moobiilka ee ay u baahan yihiin macaamiisha ku sugan Xuzhou China. Waxaan u habeyn karnaa sanduuqyada macdanta sida ku xusan baahida macaamiisha. Dabcan, waxaan sidoo kale leenahay tiro badan oo sanduuqyo macdanta guurguura oo loo isticmaalo suuqa Shiinaha ee keydka ah. Ku soo dhowow inaad soo booqato warshaddeenna! Waxaan sidoo kale ku siinaa rakibaadda goobta iyo adeegyo dayactir hadba baahidaada. Marka la soo koobo, Tianqi wuxuu ku siin doonaa xalka buuxa ee wax kasta oo aad ugu baahan tahay macdanta cryptocurrency,
Kheyraadkayagu waxay soo jiitaan milkiilayaal badan oo shiineys ah iyo macdan qodayaal waaweyn, sidaa darteed waxaan si fudud ugu heli karnaa ilaha labaad ee miinada qiimaha ugu hooseeya. Sidaa darteed, waxaan leenahay faa'iidooyin nagu filan si aan uga helno mashiinka macdanta ee aad ugu baahan tahay suuqa mashiinka macdanta. Waxaan ku damaanad qaadeynaa sharafta shirkadeena: Mashiin kasta oo Bit-qadaadiic ah oo aan dirno waxaa tijaabiya kooxdeena, waana xaqiijin karnaa howlgalka caadiga ah ee mashiin kasta oo macdanta ah.
weelka antbox, weelka antminer-ka, weelka btc, crypto macdanta asic, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto", weelka bitmain,